Somaliland: Madaxwayne Silaanyo oo Xadhiga ka jaray mashaariic laga hirgeliyey Madaarka Hargeisa
Home Somali News Somaliland: Madaxwayne Silaanyo oo Xadhiga ka jaray mashaariic laga hirgeliyey Madaarka Hargeisa
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo isaga oo gudanaaya waajibaadkiisa shaqo waxa uu maanta Kormeer iyo Mashaariic afar qaybood ka kooban uu ka fuliyey Egal International Airport.
Mashaariicdan ayaa noqonaysa mid qaranka Somaliland iyo garoonka Diyaaradaha ee Caasimada u ah sumcad iyo sharaf, una soo hoyn doonta hadii eebbe qadaro karaamo iyo horumar balaadhan oo qaranku uu hiigsado.
Madaxweynuhu waxa uu ugu horayn xadhiga ka jaray Xarunta kaydkaDab-damiska ee Garoonka diyaaradaha, sidoo kale waxa uu kormeer iyo xadhig ka jaris ku sameeyey xayn-daab dheer oo lagu wareejiyey garoonka iyo runway-giisa, kaasi oo ka kooban Taar ama shebeg, iyo kaabado shub ah, waxaanu madaxweynuhu ku soo noqday dhabada garoonka diyaaraha oo dhererkiisu dhan yahay waa inta lagu daraye 1250M marka la isku darana noqon doonta 3700 Km.
Sidoo kale waxa uu soo kormeeray xarunta shirkada Somaliland Hono Group oo ahayd shirkadii dhamaystirtay dhismaha runway-ga, waxaanu madaxweynuhu kormeerkaasi ka dib ku soo laabtay xarun aad u qurux badan oo loogu talogalay in ay ka qabsoonto xaflada furitaanka mashaariicdaasi qiimaha badan.
Xafladaasi oo laga jeediyey khudbado qiimo badan kana hadleen masuuliyiin tiro badan ayaa ugu danbayn waxa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyada Somaliland oo hambalyo u diray cid kasta oo ka gacan geysatay dhismaha mashaariicdaasi oo uu ugu horeeyo boqorka Kuwayd oo isagu maalgeliyey garoonka.
Dhimaca kale waxa uu madaxweynuhu hambalyo u diray dalka aynu jaarka nahay ee Ethiopia iyo shacbigiisa oo 24 sanno ay ka soo wareegtay nidaamka dimuquraadiyada dalkaasi ka jira.
Somaliland: NEC refutes Extension of Election Timeline Claims – Spokesperson
Deg Deg: Muuse Biixi Ma Seexdo Ila U Habeenki Saddex Jeer U Madaxweyne Farmaajo La Hadlo” Murrashaxa Cirro + Muuqaal
Lamaane Naftooda Ku Waayey Lacag U Dhiganta 1, 700 Shilinka Somaliland Ah
Somaliland: Xildhibaan Dhakool oo Dhaliilay Xeerka Kufsiga ee Horyaalla Wakiillada
Somaliland: Daawo Siyaasi Daamuur Oo Xaglo Toosiye Iyo Wasaardda Caafimadkaba Aan Waxba U Raabin
Cajiib: Sheekh Saleebaan oo Iska Casilay Xisbiga WADDANI Oo Uu 4 Maalmood Ka Tirsnaa